Creative Writing » ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ – ၁၄ (ချစ်စရာ့ ဘောလယ်)	27
တောင်ပေါ်သား says: အဲသလို ပြန်ချော့တတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုး ရှိချင်လိုက်တာ ၊ အဲဒီ ဘောလယ်ကလည်း ကောင်း သရုပ်ဖော်ရေးဖွဲ့သူကလည်း တော်
Courage says: ဒီလိုချစ်သူမျိုးတွေ့ဖို့ဆိုရင်တော့ ထမင်းထုပ်ကြီးသား သိုးသွားမယ် ထင်တယ် ကိုတောင်ပေါ်သားရေးးးးး။ အခုခေတ် မိန်းကလေးတွေက အမျှော်စိုက်ဖို့ထက် ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီဗျ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကနောင် ကိုယ်တော် ဘယ်လောက် တော်တယ် ပြောပြော
Courage says: ကနောင်ဆိုတာကလဲ စာရင်းပေါက်တောင် မိဖုရားက ၅၂ယောက်ရှိတယ်ဆိုပဲ။ ဒီလောက်များတဲ့ သူတွေကြား လှိုင်ထိပ်ထားလေး ခမျာလဲ ကိုယ့်မောင်တော်ကို တွေ့ရဖို့ မျှော်ရပေမပေါ့။
မြစပဲရိုး says: . မောင်ကာကြီး ရေ့
Courage says: ဒေါ်လေးမြပြောမှ သွားသတိရမိတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: စုဖုရားလတ်ရဲ့ သီပေါအပေါ် အချစ်ကြီး
kai says: ဥပဒေကြောင်းအရ.. မြန်မာတွေမယ်.. တလင်တမယားစနစ်ဆိုပြီး.. ရှိဖူးလို့လား…။
Courage says: ကို ALinsettရေ… စုဖုရားလက်ချက်နဲ့ ပေါ်ခဲ့တာမဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို အဲ့တုန်းက သီပေါမှ စုဖုရားကြီးဆိုတဲ့ မိဖုရားလဲရှိပြီးသားမို့ပါ။
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်ပါ့။
မြစပဲရိုး says: အရင်က မြန်မာပြည်ထဲ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်လို့ ဘဲ မှတ်နေကြတာ များတယ်။
Courage says: ရတနာဂီရိထိ စုဖုရားကြီးပါသွားပုံထောက်ရင်တော့ နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ မကျင့်သုံးခဲ့ဘူးလို့ ယူစလို့ရသဗျ။ ပေါင်းတာမပေါင်းတာ အပထား တရားဝင်တော့ သီပေါမှာ နှစ်မယား စာရင်းပေါက်တာပဲလေ။ စာရင်းမပေါက်ဆိုရင်တော့ ဒိုင်းခင်ခင် ရှိတာပေါ့။
Ma Ma says: ဘောလယ်တို့ လေးချိုးတို့ ဒွေးချိုးတို့ကို နားမလည် မခံစားတတ်လို့ ကဗျာဆိုရင် သိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။
ရန်ဖြစ်ဖို့လူတစ်ယောက်လောက် ရှာရကောင်းမလားလို့ တွေးမိရုံနဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာကို သတိရတဲ့ မောင်ကာကြီးရဲ့ သတ္တိကိုလည်း ချီးကျူးမိပါရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: အဟဲ ချီးကျူးလဲ ခံရတော့မှာပဲ မမရေ။ အဲ့လိုကြောက်တတ်လို့လဲ ခုထိ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ (ကြုံတုန်း ကြော်ညာဝင်တာ)
Mike says: .မြန်မာမင်းများ အားရင်မိန်းမယူဖို့လောက်စဉ်းစားနေခဲ့တာကလား…
မြစပဲရိုး says: ဟေ့ လူကြီး ဘာလို့ နှစ်ခါ မန့် နေတုန်း။
Courage says: သူတို့က ယူချင်လို့ ယူတာဟုတ်ပါဘူး လေးမိုက်ရ။ အားလုံးကို တစ်သားတည်း ချစ်ကြောင်းပြတာပါ။
kai says: အဲဒီခေတ်က.. သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်တိုင်း(တိုင်း) မင်းဆရာတွေရှိတယ်…။
ကွိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒီထဲ ပြောလို့ တောင် မဆုံးသေး
Courage says: ဒေါ်လေးကလဲ သူ့ကိုတော့ သွားပြီး အပြစ်မပြောပါနဲ့ နိုင်ငံကျော် ချဉ်ဖတ်ကြီးကို သနားပါတယ် ပြောနဲ့
kai says: ဂါရ၀လွန်လျှင်.. ကျွန်ဖြစ်…။
Courage says: အာဏာမက်တဲ့လူရယ် အခွင့်အရေးမက်တဲ့လူတွေ ပေါင်းပြီး လောက်ကိုက်နေကျတာပေါ့။
kai says: သံဃာတွေဂိုဏ်းတွေကွဲတဲ့အကြောင်း.. မြန်မာ့သမိုင်း ဖတ်ကြည့်ရင်.. နန်းတွင်းဝင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေ.. ကန်ထုတ်ခံရသူတွေ.. အားပြိုင်တဲ့ဇတ်လမ်းတွေ.. တွေ့လိမ့်မယ်ထင်တာပဲ..။
Courage says: ဟုတ်ကဲ့ သံဃာဂိုဏ် ကွာပြားမှုကတော့ ရှိနေစဲပါ။ သုဓမ္မာနဲ့ ရွှေကျင်ကတော့ အထင်ရှားဆုံးပေါ့။ ဒါမဲ့လေ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက မင်းအလိုလိုက်တဲ့ ဆြာတော်တွေထက် မင်းကို အရေးမလုပ်တဲ့ ဆြာတော် ပိုများသလားလို့ပါ။
manawphyulay says: အမယ်လေး မောင်တော်ဘုရားရဲ့… မျှော်တော်မမူနေပါနဲ့ဘုရား….
Courage says: အဟတ်။ မျှော်တော်ယောင် ကဗျာတွေအစား လူရည်ချွန်ကဗျာတွေ တွေ့ရမယ့် အချိန်ကို ရောက်လာပြီထင်ပါ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.